musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Passenger Traffic kuMain Airports muIreland Up 230%
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ireland Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Muhafu yekutanga yegore rino, nhandare huru shanu muIreland dzakabata zvishoma vanopfuura miriyoni imwe, pasi pe83.35 zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura, sekutaura kweCSO.
MunaJune, nhandare shanu dzeIreland dzakabata huwandu hwevatasvi vendege 309,879 XNUMX
Vatakuri vendege 283,883 XNUMX vakabatwa neDublin Airport.
June nhamba yevatyairi traffic yaive ichiri 92 muzana yakaderera pane iwo iwo mwedzi mu2019.
Nhandare dzeIrish hadzina kunzwa kukanganisa kwedenda kusvika munaKurume 2020.
Zvinoenderana neIreland Central Statistics Hofisi (CSO), huwandu hwevatakuri venhandare vanopfuura nendege huru dzenyika muna Chikumi wa2021 yaive yakwira ingangoita 23% gore pagore, asi zvakadaro iri pazasi pegore ra2019.
Mune tsamba yaro, CSO yakati muna Chikumi, nhandare shanu huru mu Ayarendi, iyo, sekureva kwevakuru vekuvhiya veIrish, inoverengera 99 muzana yeavo vanofambisa nhandare yendege yepagore uye vakabata vanhu vanosvika 309,879 229.3, vanokwira XNUMX muzana kana vachienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapfuura.
Nekudaro, iyo nhamba yaJune yekutakura vafambi yenhandare shanu yaive ichiri 92 muzana pasi pemwedzi mumwe chetewo muna 2019 apo vanopfuura mamirioni e3.77 vakatakurwa pakati pavo, yakadaro CSO, ichiwedzera kuti denda re COVID-19 rakaramba riine simba rakakura panhandare dzenyika.
Pane vese vatakuri venhandare vakabata muna Chikumi, vanhu mazana maviri nemakumi masere nevatatu kana makumi mapfumbamwe nemaviri muzana vakabatwa Dublin Airport, inokwira 219 muzana gore pagore asi ichiri 91 muzana yakaderera pane Chikumi 2019, zviverengero zveCSO zvakaratidza.
Dublin Airport akadaro mupepanhau akaburitsa neChipiri kuti yaibata vangangoita 658,000 muna Chikunguru, kukwira 72.7 muzana zvichienzaniswa naJuly 2020 asi zvakadaro 81 muzana yakaderera pane pre-denda mwero muna Chikunguru 2019.
Muhafu yekutanga yegore rino, nhandare huru shanu muIreland dzakabata zvishoma vanopfuura miriyoni imwe, pasi 83.35 zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura, sekureva kwe CSO.
Nhandare dzeIrish hadzina kunzwa kukanganisa kwedenda kusvika munaKurume 2020. Mumwedzi miviri yekutanga ya2020 chete, nhandare shanu dzenyika dzakabata vanopfuura mamirioni 4.7.